MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Club Diamond - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
၁၀၀၀၀ ကျပ် ငွေသား ပြန်အမ်း အစီအစဉ်
“ Diamond” အဖွဲ့၀င်များ အတွက်သာ ရည်ရွယ် သော အံ့သြဖွယ်ရာ ငွေသားပြန်အမ်း ခြင်း အစီအစဉ် ကြီးရောက် ရှိလာ ပါပြီ ။ ယခု ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ် မှာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိသာ ရရှိ မည်ဖြစ် သောကြောင့် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီး အံ့သြဖွယ်ရာ ငွေသားပြန်အမ်း ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဆုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်ပါနှင့်။
MPT Club “Diamond” အဆင့် သုံးစွဲသူများသာ ခံစားခွင့်ရရှိနိုင် မည် ဖြစ် ပါသည်။
မတ် လ ၃၁ရက်နေ့ တွင် အောက်ပါ အချက်အလက်များ နှင့် ကိုက် ညီမှု ရှိရ မည် ဖြစ် ပါသည်။
MPT Moneyအကောင့် စာရင်းဖွင့်လှစ် ခြင်း (MPT Money စာရင်းသွင်းရန် ဤနေရာ သို့ နှိပ်ပါ )
MPT4U အပလီကေးရှင်း မှတဆင့် အနည်းဆုံးငွေ(၁၀၀၀၀)ကျပ် ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်သွင်းခြင်း (MPT4U ဖြင့် ငွေဖြည့်ရန် ဤနေရာ သို့ နှိပ်ပါ)
ဆင်းကတ် တစ်ခုလျှင် တစ်ကြိမ်သာ သင်၏အကောင့် ထဲ သို့ (၁၀၀၀၀) ကျပ် ပြန်လည် ရရှိ မည် ဖြစ်ပါသည်။
April လ ၈ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ငွေသားပြန်လည် ဖြည့် တင်း ပေးမည် ဖြစ်ပါ သည်၊၊
မတ် လ ၆ ရက် နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဦးရာလူစနစ် ဖြင့် စတင် မည် ဖြစ် ပြီး
မတ် လ ၃၁ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ( သို့မဟုတ်)
1. 10,000 kyats ပြန်အမ်းပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်နိုင်သလဲ။
MPT Club Diamond အဆင့်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်များသာပါဝင်နိုင်သည်။
2. ယခု ပရိုမိုးရှင်းမှာ ဘယ်လိုအကျိုးခံစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်မလဲ။
သင့်တွင် MPT Money အကောင့်ဖွင့်ထားလျှင် 10,000 Kyats ပြန်အမ်းငွေကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင် သည် မတ်လ ၃၁ရက်၂၀၂၀ အတွင်း တွင် အောက်ပါ အခြေအနေ ၂ ခုနှင့် ကိုက် ညီရန် လို အပ် ပါသည်။
၁။သင်သည် MPT Money အကောင့်ကို MPT Money Application (သို့မဟုတ်) MPT Money Web Page တွင်စာရင်းသွင်းထားပြီးသူဖြစ်ရမည်။
၂။သင်သည် MPT 4U Application မှတဆင့်အနည်းဆုံး 10000 Kyats ငွေဖြည့်သွင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
အကယ်လို့ သင့်တွင် MPT 4U Application သို့မဟုတ် MPT Money Application မရှိလျှင် Application ကို Download ဆွဲထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
April လ ၈ ရက်နေ့တွင် MPT မှ 10000 Kyats ပြန်အမ်းငွေကို MPT Money အကောင့်တွင် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
4. Sim Card တစ်ကတ်ကို အကြိမ်ရေ ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်မလဲ ။
MPT Sim Card တစ်ကတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ပြန်အမ်းငွေ 10000 Kyats ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည် ။
5. ပြန်အမ်းငွေကို မည်သည့်အချိန်တွင် ရရှိနိုင်မည်နည်း ။
ပြန်အမ်းငွေအား MPT Money အကောင့်ထဲတွင် April လ ၈ ရက်နေ့တွင်ရရှိမည်ဖြစ်သည် ။
6. ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အချိန်အထိလဲ ။
ယခု ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ March လ ၆ ရက်နေ့မှစတင်မည်ဖြစ်ပြီး March လ ၃၁ ရက် (သို့မဟုတ်) ပြန်အမ်းငွေပမာဏ ၁ ဘီလီယံကုန်ဆုံး သွားသောအခါ အစီအစဥ် အလိုအလျောက် ပြီးဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အစီအစဥ်မပြီးဆုံးမီ အမြန်ဆုံးငွေဖြည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည် ။
7. ကျွန်ုပ်သည် ပရိုမိုးရှင်း Message (စာတို) ပေးပို့မှုကို လက်ခံရရှိသည့်အပြင် Wave Pay Application ကိုအသုံးပြု၍လည်း ငွေဖြည့်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ပြန်အမ်းငွေ ပြန်လည်မရရှိခဲ့ခြင်းမှာ ဘာကြောင့်လဲ ။
ပြန်အမ်းငွေများကို April လ ၈ ရက်နေ့တွင်သာ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြန်အမ်းငွေရရှိနိုင်ရန်အတွက် 10000 Kyats အနည်းဆုံးငွေဖြည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီး ငွေလက်ခံနိုင်ရန် MPT Money အကောင့်ရှိရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။
8. ယခုပရိုမိုးရှင်းတွင် ငွေပေးချေမှုအားလုံး အကျုံးဝင်ပါသလဲ ။
မ၀င်ပါ ။MPT ဖုန်း နံပါတ်အတွက်ငွေဖြည့်ခြင်းသာအကျုံးဝင်ပါသည်။
9. USSD နှင့် SMS မှငွေဖြည့်မယ်ဆိုရင်ရော ပြန်အမ်းငွေရရှိနိုင်မလား
မရရှိနိုင်ပါ။ MPT 4U မှ ငွေဖြည့်ခြင်းသာအကျုံးဝင်ပါသည်။